Tag: shaqaalaha | Martech Zone
Waad Sii Wadaa Isticmaalka Eraygaas "Hal-abuur"…
Sabti, Noofembar 7, 2020 Axad, Janaayo 24, 2021 Douglas Karr
Robert Half Technology iyo Kooxda Hal-abuurka waxay daabaceen daraasad iyo infographic, Digital Suuq Dissonance, halkaas oo 4 10 XNUMX kii ka mid ah ay sheegaan in shirkadoodu ka maqan tahay taageerada looga baahan yahay mashaariicda suuq geynta dijitaalka ah. In kasta oo aanan shaki ka qabin in taasi sax tahay, haddana daraasadda ayaa markaa qaar ka mid ah xogta u kala jabineysa laba baaldi, maamulayaasha IT-ga iyo hal-abuurayaasha fulinta. Ma hubo in aan aaminsanahay in ay jiraan nooc ka mid ah isku xirnaanta u dhexeeya ahaanshaha qof IT ah ama qof hal abuur leh.
Saameynta Baraha Bulshada ee Khibradda Macaamiisha
Saturday, April 16, 2016 Sabti, Febraayo 13, 2021 Liz Greene
Markii ganacsatadu markii ugu horraysay ku soo biirtay adduunka warbaahinta bulshada, waxaa loo adeegsaday madal lagu suuqgeeyo wax soo saarkooda laguna kordhiyo iibka. Si kastaba ha noqotee, dhowrkii sano ee la soo dhaafay, si kastaba ha noqotee, warbaahinta bulshada ayaa ku dhex milmay barta loogu jecel yahay bulshada internetka - meel ay kula falgalaan astaamaha ay jecel yihiin, iyo tan ka sii muhiimsan, caawimaad raadso markay arrimaha leeyihiin. Macaamiil badan ayaa waligood raadinaya inay kula xiriiraan noocyada warbaahinta bulshada, iyo adiga
Abaalgud madax-bannaanida, Xakamaynta iyo Ujeeddada
Talaado, Agoosto 3, 2010 Sabtida, Oktoobar 18, 2014 Douglas Karr
Abaalmarino. Marka la eego shaqooyinkeygii ugu dambeeyay, madaxdeyda marwalba way layaaban yihiin inaanan dan ka laheyn abaalmarinta lacageed Ma ahan inaanan lacagta rabin, ee waa inaanan igu dhiirrigelin. Wali ma ihi. Xaqiiqdii, had iyo jeer waxay ahayd wax yar oo cay ah aniga - inaan si uun u sii shaqeyn doono haddii aan haysto karooto ku hor daadanaya horteyda. Had iyo jeer waan shaqeyn jiray oo waxaan u heellanaa kuwa i shaqeeya.
Yaa Haynaya Saliidaada?
Jimco, Janaayo 16, 2009 Isniin, November 4, 2013 Douglas Karr
Maalin dhan - maalin kasta - dadwaynuhu waxay i soo diraan, fariin ii soo diraan, i soo booqdaan, i soo booqdaan, i soo wacaan oo si dhakhso leh iigu soo diraan su'aalo ku saabsan aagagga, awoodaha, CSS, tartanka, istaraatiijiyadaha ereyada muhiimka ah, arrimaha macmiilka, meelaynta iibka, istaraatiijiyadaha suuqgeynta, hubinta, baraha bulshada, iwm. Waxaa laygu martiqaadaa inaan hadlo, wax qoro, caawiyo, la kulmo… adigu magacow. Maalmahaygu waa mashquul yihiin oo si aan caadi ahayn u dhammaystirayaan. Anigu ma ihi qof caqli badan laakiin waxaan leeyahay khibrad badan oo dadku way gartaan.